Malunga nathi -Baron (China) Co., Ltd.
IBaron (China) Co., Ltd.yasekwa ngotyalo-mali lweBaron Group International Holding Co., Ltd. Ixhaswa ziimpawu ezimbini eziphambili zamanye amazwe, iBesuper kunye neBaron, luphando kunye nophuhliso, uyilo, imveliso, ukuthengisa, inkonzo njengenye yamashishini amakhulu abonelela ngeentsana.
Ngaphandle kweshishini le-OEM, kulo nyaka inkampani yethu, isekwe kumava eminyaka yeQela kunye nokwazisa ngentengiso, isungule ngenkuthalo inani leemveliso ezizimeleyo zokubonelela abathengi ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu nezingabizi kakhulu, kubandakanya iBesuper Fantastic T Diapers, iPandas Eco. Iidapu, iiNabile ezisandul 'ukuzalwa, njl., Ezithandwa kakhulu ngabathengi.
Phuhlisa kwaye unikezele ngeemveliso ze-ODM
Siphuhlisa iimveliso ze-ODM kwiivenkile ezinkulu, iivenkile zononophelo lomntu kunye namanye amashishini ngokumamela, ngokujonga nangokucinga malunga neemfuno zabathengi. Uluhlu olubanzi lweemveliso, ezinjengee-diapers zabantwana, i-wipe ezimanzi, i-diapers yabantu abadala, iingxowa zenkunkuma e-eco-friendly, i-napkins yabasetyhini kunye nezinye iimveliso zononophelo ukuhlangabezana neemfuno zabathengi.
Ummeli weMveliso yePrimiyamu
Iminyaka, inkampani yethu isebenze nzima ukuseka ubudlelwane bexesha elide kunye neenkampani zemveliso yezempilo kwihlabathi liphela. Inkampani yethu imele inani leemveliso ezikumgangatho ophezulu, kubandakanya iCuddles, iMorgan House, uKhetho loMama, Amandla aPheleleyo, njl. Sinikezela ngemveliso zononophelo lwabantwana, iimveliso zokhathalelo lwabantu abadala, iimveliso zononophelo lwabasetyhini, njl., Kwaye sihlangabezana neemfuno zeentlobo ezahlukeneyo zabathengi.
IQela lobuNkokeli elifanelekileyo
Iqela lobunkokeli elikhokelayo likhokela inkampani kwimodeli yeshishini yanamhlanje. Ukucinga ngobuchule kusikhokelele ekubeni sityhale iimveliso zethu kuMazantsi mpuma eAsia, eAfrika, eOstreliya, eUnited States nakwihlabathi liphela.
Ngeminyaka emininzi yamava okuthengisa, ulwazi olunobutyebi bemveliso, ukucinga ngokuqinileyo kunye nokuyila, iqela lethu lokuthengisa kunye nabathengi abahlukeneyo ukubonelela ngeemveliso ezisemgangathweni kunye nenkonzo esondeleyo.
Ngenxa yokumiselwa komxokelelwano wokubonelela, ukuthengwa okuphakathi kusizisele inzuzo yendleko ezibonakalayo; Ulawulo olungqongqo lwenkqubo yemveliso lukonyuse izinga leemveliso ezigqityiweyo kwaye zanciphisa iindleko, ukuze sikwazi ukubonelela abathengi ngexabiso eliphezulu kunye neemveliso zexabiso elifikelelekayo.
Singumthengisi wesikhokelo esivunyelwene ngokugunyazisa amashishini e-diaper, ukutshintshiselana rhoqo ngenyanga ngezinto ezihlaziyiweyo kunye netekhnoloji, siqinisekisa ukuhlaziywa kwemveliso ngesiqhelo ngexesha kunye nolawulo lomgangatho wemveliso.
I-Diaper esanda kuzalwa, Ukusula kwabantwana kulusu olubuthathaka, Ukufakwa kwi-Super diabor yabantu abadala, Umgangatho ophezulu we-Eco diaper, Ilweyile Banokubulawa, Umntwana olilitha,
Umntwana olilitha, I-Diaper esanda kuzalwa, Ukusula kwabantwana kulusu olubuthathaka, Umgangatho ophezulu we-Eco diaper, Ilweyile Banokubulawa, Ukufakwa kwi-Super diabor yabantu abadala,